Serivisy fampiroboroboana farany varotra farany any Sina - Casting Minghe
Inona ny fizotran'ny fanodinana vy - Serivisy fanodinana
Ny deburring dia ny fanesorana ireo tsilo na tselatra miforona eo amin'ny sampanan-tsoloky ny faritra misy azy sy ny amboniny. Ny sasany amin'ireo burrs amin'ny faritra mekanika dia vokatry ny fahasimban'ny plastika mandritra ny fizotran'ny fanapahana; ny sasany flash avy amin'ny fanariana ary maty forging, ary ny sasany sisa tavela amin'ny welding sy extrusion. Miaraka amin'ny fanatsarana ny indostrialy sy ny mandeha ho azy, ny sehatry ny fanodinana mekanika, indrindra eo amin'ny sehatry ny fiaramanidina, aerospace ary fitaovana, dia nampitombo ny fitakiana mazava tsara amin'ny faritra mekanika sy ny fanamafisana ny famolavolana mekanisma. Miharihary manokana ny fahasimban'ny burrs, izay manaitra ny ahiahin'ny olona tsikelikely. Fiheverana ankapobeny, ary nanomboka nandinika ny fomba famoronana sy ny fomba fanesorana ny burrs.
Ny fomba famolavolana ny faritra mekanika dia azo zaraina amin'ny fanodinana fitaovana, fanodinana deformation, fanodinana fanampiny sns. Amin'ny karazana fanodinana rehetra, ny ampahany fanampiny azo avy amin'ilay ampahany namboarina izay tsy mifanaraka amin'ny endrika sy habe takiana dia ny burr. Ny famolavolana burrs dia miovaova amin'ny fomba fanodinana. Araka ny fomba fanodinana samihafa, ny burrs dia azo zaraina ho:
Casting burr: ny fitaovana be loatra ateraky ny fiarahan'ny lasitra na ny fakan'ny vavahady. Ny haben'ny burr dia matetika aseho amin'ny milimetatra.
Forging burr: Izy io dia vokatry ny fiovaovan'ny plastika amin'ny fitaovana forging eo am-piarahan'ny lasitra vy. Boriborin'ny herinaratra sy lasantsy mandeha amin'ny herinaratra: ny boriborin'ny herinaratra elektrika no burrs eo ambonin'ilay ampahany izay mivoaka avy ao ny lasitra; burrs welding lasantsy no ilay silamo tafavoaka avy ao amin'ny incision rehefa tapaka ny entona.
Punching burrs: Rehefa totohondry dia misy elanelana misy eo amin'ny totohondry amin'ny maty sy ny maty ambany, na misy elanelana eo amin'ireo fitaovana fanapahana amin'ny fanapahana, ary ny burrs dia vokarina noho ny fitafiana maty. Ny endrik'ilay burring punch dia miovaova arakaraka ny fitaovan'ny lovia, ny hatevin'ny takelaka, ny elanelana misy eo amin'ny maty ambony sy ambany, ary ny endrik'ilay ampahany voatondro.
Fanapahana burrs: ny fomba fanaovana milina toy ny fihodina, ny fikosoham-bary, ny planina, ny fikosoham-bary, ny fandavahana ary ny famerenana amin'ny laoniny dia mety hamokatra burrs ihany koa. Ny burrs novokarin'ny fomba fanodinana isan-karazany dia manana endrika samihafa miaraka amin'ny fitaovana sy ny masontsivana fanodinana. Burr mould plastika: toy ny fanariana burr, burr novokarina niaraka tamin'ny lasitra plastika.
Ny fisian'ny burrs dia hahatonga ny rafitra mekanika iray tsy hiasa ara-dalàna, hampihena ny fahamendrehana sy ny filaminana. Rehefa mihodina na mihetsiketsika ny masinina misy burrs, ny burrs izay milatsaka dia hahatonga ny faritra mihosin'ilay masinina hitafy aloha loatra, hampiakatra ny tabataba, ary hiteraka fikatsoana mihitsy aza ny mekanika; ny rafitra herinaratra sasany dia mety ateraky ny burrs rehefa mihetsika miaraka amin'ny mpampiantrano. Ny fahalavoana dia mahatonga ny fizaran-tany hivezivezy fohy na simba ny sahan'andriamby, izay misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny rafitra ara-dalàna; ho an'ny singa rafitra hydraulic, raha latsaka ny burr, dia hisy ilay burr ao amin'ny elanelana miasa kely isaky ny singa hydraulic, ka mahatonga ny valizy mikatso, ary voasakana ny takelaka boribory na sivana. Vokatr'izany, ny lozam-pifamoivoizana dia mety hiteraka fikorontanan'ny tsiranoka na fikorianan'ny lamina, izay mampihena ny fahombiazan'ny rafitra. Ireo manam-pahaizana japoney japoney dia mino fa ny 70% amin'ireo antony misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny fiainana sy ny ain'ny faritra hydraulic dia vokatry ny burrs; ho an'ireo mpanova dia 20 ka hatramin'ny 90% ny fatiantoka fototra ao amin'ny burr dia avo noho ny an'ny nesorina nesorina ilay burr, ary mitombo miaraka amin'ny fitomboan'ny fahita matetika. . Ny fisian'ny burrs koa dia misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fivorian'ny rafitra mekanika, ny kalitaon'ny fikarakarana ny fizotran'ny fizotran'ny fizarana manaraka ary ny fahamarinan'ny valin'ny fizahana.
Androany, ny mpanjifa dia mampiasa ny serivisintsika mitarika deburring na dia tsy ilaina aza ny fananganana. Nandritra ny 35 taona dia nivoatra ny serivisinay deburring izahay hanomezana ny mpanjifa vahaolana mety amin'ny fampiharana azy manokana. Ny tranokala Minghe dia feno rafitra feno fihenan'ny cryogenika hanohanana ireo mpanamboatra hatramin'ny dingana prototypa ka hatrany amin'ny famokarana lehibe. Ireo injenieran'ny Minghe dia handinika ny famaritana ny vokatra, ny antso an-tariby ary ny fitakiana amin'ny volavola mba hisafidianana ny vahaolana mahomby indrindra amin'ny tetikasa deburring-nao.
Ahoana no fanimbana ireo ampahany?
Minghe Casting® Deburring dia mirehareha amin'ny fanolorana serivisy fanalefahana fifanarahana mifanaraka amin'ny ISO 9001 ho an'ny fanesorana ireo burrs machine ao anaty casting casting sy metaly voafantina. toy izao manaraka izao:
- Fanodinana simika: Ampiasao ny fitsipiky ny fihetsiky ny elektrokimika mba hamenoana ho azy ny fizotran'ireo faritra vita amin'ny akora metaly. Izy io dia azo ampiasaina be dia be amin'ny fihenan'ny vatan'ny paompy, vatan-tsolika, tsorakazo mampifandray, fantsom-boaloboka plunger ary faritra hafa amin'ny fitaovana metaly samihafa amin'ny pneumatika, hydraulic, milina enti-miasa, paompy menaka solika, fiara, motera ary indostria hafa. Izy io dia mety ho an'ny burrs anatiny sarotra esorina, ampahany voadinika amin'ny hafanana ary vita.
- Manolotra dingana cryogenika marobe izahay hanesorana ireo burrs machine. Ny fananganana, ny toerana ary ny hamafin'ny burr izay mitaky fanesorana dia hamaritra izay fizotran'ny deburring no mety indrindra.
- Ny fizotran'ny Cryogenic Deburring dia mampiasa fantsom-baravarankely, fanala ary haino aman-jery PC misy krôjôjika mipoaka mba hanesorana ireo burrs amin'ny faritra masinina CNC.
- Ny fizotran'ny Cryogenic Tumble Deburring dia manala ireo burrs amin'ny géometry ivelany amin'ny faritra misy ny masinina amin'ny alàlan'ny hatsiaka sy fianjerana raha tsy misy fampielezana haino aman-jery.
- Ho fanampin'izany, ny fizotran'ny Ice Ice maina dia manaisotra mafy hanatratra burrs amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny ranomandry maina amin'ny haino aman-jery. Ity endrika deburring ity dia ampiasaina amin'ny ampahany sarobidy satria ampahany iray ihany no azo zahana amin'ny fotoana iray.
- Fanodinkodinana an-tanana
Safidio ny fizotra Deburring tsara indrindra
Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hahitanao ny fomba ahafahan'ny olona, ​​fitaovana ary fitaovanay mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanodinanao.